Isisombululo seSaline 0.9%
Eli phepha linolwazi ngeSaline Solution 0.9% ye ukusetyenziswa kwezilwanyana .
Isaline Solution 0.9% Iimpawu
Izilumkiso kunye nezilumkiso ngeSaline Solution 0.9%
Ulwazi kunye nomthamo wolwazi ngeSaline Solution 0.9%
Inkampani: Clipper (Phoenix Pharm.)
ndingathatha i-zyrtec kunye ne-allegra
Isisombululo seSaline 0.9% Isilumkiso
Isisombululo ngasinye samanzi esine-100 mL siqulathe:
Milliequivalents ngeNcwadi nganye
154 mEq / L
I-osmolarity iyonke ngama-308 milliosmoles kwilitha nganye.
Gcina phakathi kwe-15 ° C kunye ne-30 ° C (59 ° F kunye ne-86 ° F).
Ukusetyenziswa kunyango olubuyisela isodiyam, ikloride kunye namanzi ezinokuthi ziphele kwizifo ezininzi. Kuba esi sisombululo sisotonic esinamanzi emzimbeni, sinokusetyenziselwa isinyibilikisi okanye isinyibilikisi, i-antibiotics kunye namanye amayeza kunye neebhayoloji apho ziyahambelana khona, kunye nokuhlamba inwebu yangaphakathi kunye nezinye iindawo zomzimba.
Le mveliso ayiqulathanga zigcinwa. Sebenzisa konke okuqulathiweyo xa kuvulwa kuqala. Lahla nasiphi na isisombululo esingasetyenziswanga.
Ukufudumala kubushushu bomzimba kwaye ulawule kancinci ngenaliti efakwa ngaphakathi okanye ngaphakathi. Isixa kunye nomyinge wolawulo kufuneka ugwetywe ngugqirha wezilwanyana ngokunxulumene nemeko yokunyangwa kunye nempendulo yeklinikhi yesilwanyana, ulumkele ukunqanda ukuphelelwa ngamanzi emzimbeni. Xa isetyenziswa njengesinyibilikisi okanye isinyibiliko sokwenza amayeza kunye neebhayoloji, landela umkhombandlela womenzi.
Yenziwe nguNova-Tech Inc., eGrand Island, NE 68801
Iimpawu zorhwebo zizinto zeClipper Distributing Company, LLC.
Yenzelwe iNkampani yokuSasaza iClipper, LLC, eSt. Joseph, MO 64507
Kwenziwe zonke iinzame zokuqinisekisa ukuchaneka kweSoline Solution 0.9% yolwazi olupapashwe apha ngasentla. Nangona kunjalo, kuhleli kuluxanduva lwabafundi ukuba baziqhelanise nolwazi ngemveliso equlethwe kwileyibhile yemveliso yase-US okanye into yokufaka iphakheji.
kunye nokusetyenziswa kwezolonwabo ezingama-5513
ubomi besiqingatha seyeza
Ativan vs xanax idosi
I-davis yetyuwa eqhelekileyo pdf
Amayeza e-ibs ekhawuntareni
Ngaba i-humira ibangela ukutyeba kobunzima